Jabaan waxey ka koobantahay 6,852 jasiiradood, afarta ugu waa weyn oo boqolkiiba todobaatan daboolo dhulka jabaan waa Honshu, Hokkaido, Kyushu iyo Shikoku. Jabaaniiska waxee iskuugu wacaan (Nihon), luqadooda neh waxee dhahaan (Nihongo). Magaca Nibon micnaheeda waa jabaan laakiin waxee u adeegsadaan, lacagaha, bashqadaha iyo cayaaraha caalamka iyo wax la mid ah.Jabaan waxaa loo micneeyaa wadanka qoraxda ka soo baxdo, 日 (qorax) 本 (soo bax), markii hore jabaan waxaa loogu yeeri jiray magacyo badan, gaar ahaan wadanka ee taariikhda isla leeyihiin ee Shiinaha, waxee jabaan ugu yeeri jireen (yamato 大和). Erayga qorax ka soo baxa waxoo asal ahaan ka imaaday shiinaha, sababtoo ah jabaan waxee ka xigtaa dhinaca bariga markii la fiiriyo qaarad aasiya. Ereyga Japan ee Japan waa 日本, oo lagu magacaabo Nihon ama Nippon iyo macno ahaan waxa loola jeedaa "asalka qorraxda". Nichi dabeecadda (CH) macnaheedu waa "qorax" ama "maalin"; saldhigga macnihiisu waa "saldhig" ama "asal".  Sidaas daraadeed macneheedu waa "asalka qorraxda" waana ilaha caanka ah ee reer galbeedka caanka ah "Land of the Sun Rising". 
Las carrèras japonesas que son sovent conhidas de monde: ací au quartièr de Shibuya a Tōkyō.
Un burèu de vòte dens la prefectura dTemplate:'Ōsaka
Rikoodhkii ugu horreeyay ee magaca Nihon wuxuu ka muuqdaa taariikhda Shiinaha ee taariikhda ah ee hannaanka Tang, Book of Old Tang. Dhamaadkii qarnigii toddobaad, wafdi ka yimid Japan ayaa codsaday in Nihon loo isticmaalo magaca dalkooda. Magacani waxaa laga yaabaa in uu asal ahaan ka soo jeedo warqad loo diray 607 waxaana lagu diiwaan geliyay taariikhda rasmiga ah ee Suudiiste. Prince Shōtoku, Regent of Japan, ayaa u diray ergeyga Shiinaha warqad kaas oo uu ugu yeeray "Boqortooyada Dhulka ee Qorraxdu kacdo" (日 出处 天子). Farriinta ayaa yiri: "Halkan, waxaan ahay, Boqortooyada waddanka qorraxdu soo baxdo, u dir warqad si aad u aragto Boqortooyada dalka ee qorraxdu u eg tahay.
Lo sièti sociau de Nissan a Tòquio
Visa Jabaan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jabaan&oldid=209955"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Febraayo 2021, marka ee eheed 17:29.